Famaritana Estera ao amin'ny Chemistry
Ny ety dia singa voajanahary izay nosoloan'ny vondrona hydrocarbon ny vodiandro ao amin'ny vondron'ny carboxyl . Estera dia avy amin'ny karôsinina asidra ary (matetika) alikaola. Raha manana ny carboxylic acid ny vondron'ny -COOH, ny ranomandry dia nosoloin'ny hydrocarbon ao amin'ny ester. Ny kininina ara-tsimekanan'ny ester dia mamaritra ny endriky ny RCO 2 R ', izay i R dia ny ampahan'ny hydrocarbon ny asidra carbony ary ny R' no alikaola.
Ny teny hoe "ester" dia novolavolain'ny mpahay simia alemà Leopold Gmelin tamin'ny taona 1848. Azo inoana fa ny teny dia ny fifandonana amin'ny teny alemana Essigäther , izay midika hoe "etetika acetic".
Ohatra avy amin'ny Estera
Ethyl acetate (ethyl etanoate) dia ester. Ny solika amin'ny karbaylyl ny asidra acetic dia nosoloina vondrona ethyl.
Ny ohatra hafa amin'ny esters dia ahitana propanoate ety, propano metanoate, etanoate propane, ary ménanoate methyl. Ny glyzeride dia esters of acid glycerol.
Ny menaka sy ny menaka dia ohatra amin'ny esters. Ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo dia ny tebiteby misy ny esters. Raha toa ka ambany ny efitry ny efitry ny efitry ny efitrano, ny ester dia heverina ho menaka (ohatra, menaka zavamaniry). Etsy andaniny kosa, raha miorina amin'ny hafanana amin'ny ety ivelany ny ester, dia heverina ho matavy (ohatra, dibera na tavy).
Ny anaran'ny esters dia mety hampikorontan-tsaina vaovao amin'ireo mpianatra simia organika satria ny anarana dia mifanohitra amin'ny lamina izay anoratana ny rôbôla.
Raha ny etiônate ety ety, ohatra, ny vondrona Ethyl dia voasoratra eo anoloan'ny anarana. Ny "etanoate" dia avy amin'ny asanika etanoika.
Na dia avy amin'ny alikaola sy ny asidan'ny IUPAC aza ny anaran'ny esters, dia maro ireo esters no antsoina amin'ny anaran'ireo trivial. Ohatra, ny etanoate dia antsoina matetika hoe acetate, ny metanoate dia mamorona, ny propanoate dia antsoina hoe propionate, ary butanoate dia antsoina hoe butyrate.
Ny Ester dia somary tsy marefo amin'ny rano satria afaka miasa toy ny akoho hidiram-bozaka izy ireo mba hametrahana fatorana boribory. Na izany aza, tsy afaka manao toy ny mpanome rà ny rano izy ireo, noho izany dia tsy mifandray amin'ny tena izy ireo. Ny Estera dia tsy dia mendri-kaja kokoa noho ny karibôka asidra mitovy karazana, mihoatra lavitra kokoa noho ny ethers, ary latsaky ny polar-dray noho ny alkola. Estera dia manana fofona manitra. Mety ho samy hafa izy ireo amin'ny fampiasana chromatography gazy noho ny tsy fahavitrihany.
Ny maha-zava-dehibe an'i Esters
Ny Polyester dia kilasy manan-danja amin'ny plastika , ahitana monomerina mifandraika amin'ny esters. Ny molekiolan'ny lanjany ambany dia miasa toy ny molekiolao sy ny fofomamy. Ny glyzerides dia lipida izay hita ao amin'ny menaka solika sy ny tavy biby. Ny fototarazo dia manamboamboatra ny ADN. Ny mpitsabo nitra dia matetika ampiasaina amin'ny fipoahana.
Fanamarinana sy fanavaozana
Ny fanamarinana dia ny anarana nomena ny fihetsiketsehana simika rehetra izay manome endriky ny vokatra. Indraindray ny fanehoan-kevitra dia azo ekena amin'ny fofom-biriky na ny felam-boninkazo navoakan'ny fihetsiketsehana. Ohatra iray amin'ny fihetsiky ny synthesis Etera ny fanadihadiana Fischer, izay ahazoana asidra carbonylika amin'ny alikaola eo anatrehan'ny fisotroan-dronono. Ny endrika ankapobeny amin'ny fihetseham-po dia:
Mihabetsaka ny fanehoan-kevitra raha tsy misy fanenjehana. Mety hanatsara ny fambolena amin'ny fampidirana tafahoatra ny alika, amin'ny fampiasana fanafody mando (ohatra: asidra solfiky), na fanesorana rano.
Ny fanetsana dia fanehoan-kevitra momba ny simika izay manova ny ester iray ho any amin'ny iray hafa. Asidra sy bases ny fanakianana. Ny fehin-kevitra ankapobeny ho an'ny fanehoan-kevitra dia:
PH Endrika famaritana sy ohatra
Famaritana betsaka momba ny fahasalamana sy ny sôsialy
Famaritana ny tsimokaretina ao amin'ny Chemistry
Famaritana ny famaritana ny paraky
Mozika Piano ho an'ny "Noel Voalohany"
Raha nahazo fahaleovan-tena avy any Grande-Bretagne ny Emiratin'ny Emirà Arabo
Sai Baba avy any Shirdi, Saint of Hinduism sy Islam
Repoblikana Primary Jokes
Wyclef Jean's Ten Great Hits
Manaova fampiharana amin'ny Metaphors sy Similes
ROMANO Famerenana anarana sy orinasa
Adi-hevitra momba ny herisetra: Tendrombohitra King Mountain
Manana olana mikasika ny fivavahana aho ... inona no ataoko?
Famaritana ny anarana sy tantaram-pianakaviana COOPER
Fombafomba handosirana fahazarana tsara
Manaraka amin'ny stingrays
Fandinihana ny 'Snow' nataon'i Charles Baxter
Inona no atao hoe euphemisma?
Ahoana ny fiasan'ny doppler radar?
Mifampitaha amin'ny Zoma Tsara ve ny fiombonana?
Fanadihadiana momba ireo fiteny Shinoa samihafa
Tranonkala manan-danja ho an'ny mpanamboatra akanjo